Dhibaatooyin gumaysigu u gaystay dadwaynaha
Soomaaliya: Dadka taakulada u baahan oo kordhay
Jaaliyada Ogadenya ee Denmark oo xustey sanadguuradii 24aad ee aas-aaskii jwxo.
Taariikh halgameedkii Ogadenya(wslf &jwxo).
Goos Goos ku saabsan Ogadenya.
Labadii toddobaad ee u denbeeyay dagaallo dhawr ah oo dhex-maray CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay ugu yaraan 74 askari, waxaa sidoo kale lagaga dhaawacay 89 askari, sidaas waxaa noo soo tabiyay wariyaha nooga soo warrama dalka Ogaadeenya. Dagaalladaasi waxay u dheceen sidata;
23/08/08 ciidammo gumaysigu leeyahay oo ku sugnaa Bukudhabo weerar lagu qaaday waxaa lagaga dilay 7 askari, 10 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/08/08 Habaas-wayne, oo Awaare ka tirsan, weerar loogu gaystay ciidammo gumaysigu leeyahay waxaa lagaga dilay 1 askari, 3 kalana waa lagaga dilay.
Sidoo kale 22/08/08 dagaal ka dhacay Galaroobe, oo degmada Dhuxun ka tirsan, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 12 askari, 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
21/08/08 dagaal isku-dhac ah oo dhex-maray ciidammada gumaysiga iyo shacbiga ku dhaqan deegaanka Harta-sheekh, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 3 askari, 10 kalana waa lagaga dhaawacay. Waxaa sidoo kale shacabka ka dhintay 3 qof.
20/08/08 dagaal ka dhacay Bubi, oo Qabridaharre ka tirsan, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 5 askari, 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/08/08 dagaal ka dhacay duleedka Qorile, oo Dannood ka tirsan, waxaa gumaysiga lagaga dilay 3 askari, 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
18/08/08 dagaala isaguna ka dhacay Dooya-dheer, oo Dhuxun ka tirsan, waxaa gumaysiga lagaga dilay 10 askari, 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 18/08/08 ciidammo labaatan ah oo ka soo goostay kuwa gumaysiga ee fadhigoodu yahay Jeexdin ayaa ciidammo kale dhexda ku gaadheen, waxaana dhex-maray dagaal adag, iyadoo ay ku kala dhinteen 10 askari, 15 kalana ay ku kala dhaawacmeen.
17/08/08 Maraacaato, oo Qabridaharre ka tirsan, dagaal ka dhacay waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 13 askari, 15 kalana waa lagaga dhaawacay.
15/08/08 dagaal ka dhacay Wabi-yar, waxaa gumaysiga lagaga dilay 4 askari, 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
13/08/08 dagaal ka dhacay Dhanqa, oo Fiiq ka tirsan, waxaa gumaysiga lagaga dilay 3 askari, 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 13/08/08 dagaal ka dhacay Ceebla-cad, oo Sagag ka tirsan, waxaa gumaysiga lagaga dilay 3 askari, 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
Ciidammada gumaysiga ayaa dhibaatooyin kala duwan u gaystay dadwaynaha rayadka ah ee Ogaadeenya. Dhibaatooyinkaasi waxay u dheceen sidatan;
Gabadh ay ciidammada gumaysigu ku kufsadeen magaalada Dhuxun 10/08/08 oo lagu magacaabi jiray Ruqiya Bashiir Aaden, taasoo aan warkayagii hore idiinku sheegnay ayaa u geeriyootay dhaawicii ka soo gaadhay dhibaatada ay ciidammada gumaysigu u gaysteen.
24/08/08 Bukudhabo, oo Awaare ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Khaliif Cilmi Jiil
2- C/llaahi Cirroole Salaan iyo
3- Xuseen Maxmuud
22/08/08 Galaroobe, oo Dhuxun ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu 9 Neef oo Adhi ah kaga qasheen nin shacab ah oo lagu magacaabo Axmed Maxamed Nasiye.
21/08/08 Sagag waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Axmed Cabdi-Samad
2- Ardo Cabdi Gadhle
3- Sha Muuse oo magaciisa oo buuxa aanaan haynin
4- C/Wali Siraad iyo
5- Sh Mukhtaar oo magaciisa oo buuxa aanaan haynin
Sidoo kale 21/08/08 meesha lagu magacaabo Baali Xaram, oo Fiiq ka tirsan, waxay ciidammo gumaysigu Adhyo kaga dhaceen dad shacab ah, waxayna kala yihiin;
1- Maxamed C/llaahi Feetin oo ay 7 Adhi ah ka dhaceen iyo
2- Ilma Carte oo ay iyagana 15 Neef oo Adhi ah ka dhaceen.
15/08/08 Gala-dhuurre, oo Dhuxun ka tirsan, waxay ciidammada gumaysigu jidhdil baʼan ugu gaysteen, ka dibna xidhxidheen dadka kala ah;
1- Ardo Cabdi-dhuub
2- Maryama Maxamed Xasan iyo
3- Maxamed Xasan
Dhinaca kale shir maamul ku sheegga Kililka iyo Baarlamaan ku sheegga uga billowday magaalada Jigjiga 21/08/08 ayaa wali socda. Wararka ka soo baxayana waxay sheegayaan in ilaa iyo hadda 9 xubnood laga qaaday xilal heer degmo ah oo ay hayeen. Waxayna kala yihiin 5 xubnood oo Fiiq ah, 2 xubnood oo Dhagaxbuur ah iyo 2 xubnood oo Qabridaharre, waxaana wali socota is-eedayntii ay calooshood u-shaqaystayaashu isu jeedinayeen, iyadoo la filayo in xubno badan oo kale iyagana lagala noqon doono xilalkii ay ku magacownaayeen.
Dadka gargaarka degdegga ah u baahan ee Soomaaliya ku dhaqan ayaa sannadkan gudihiisa 77% kor u kacay, iyadoo tirada dadka taakulada degdegga ah u baahan ay dhan yihiin 3.2 milyan oo qof, sidaas waxaa muujisay warbixin cusub oo la soo saaray.
Warbixintan ayaa sheegtay in dhibaatadan ay saldhig u yihiin arrimo dhawr ah oo is-biirsaday, kuwaasoo kala ah roob la'aan, sicir barar, qiima dhaca lacagaha iyo xoolaha iyo ammaan xumada tan iyo billowgii sagaashanaadka ka jirtay gobolka Geeska Afrika.
Dhinaca Ogaadeenya ayaa dhibaato middan la mid ahi ka jirtaa, iyadoo gobollada Ogaadeenya oo dhan ay ka jiraan Abaaro naafeeyay dad iyo duunyaba, biya laʼaan iyo xayiraad ay ciidammada gumaysigu ku hayaan dadwaynaha iyo ururrada samafalka ah ee isku daya inay dadkaas u soo gurmadaan.